Telefónica, Vodafone ary BBVA dia notafihana | Androidsis
Nanafika i Telefónica, Vodafone ary BBVA
Miguel Gaton | | About us, Mpikirakira telefaona
Mbola tsy misy fampahalalana tena manokana nefa toa ny tambajotran'ny Telefónica, Vodafone, BBVA ary Capgemini dia misambotra mandritra ny minitra vitsy ary miakatra ny fanairana ao amin'ny biraon'ireto orinasa ireto, milaza amin'ny mpiasan'izy ireo ny rafitra adiresy ampahibemaso mba hampifandray ny solosain'izy ireo amin'ny tambajotra anatiny.
Raha ny loharanom-baovao anatiny dia momba izany fanafihana matotra izay manimba ny tsy fivadihan'ny tambajotra amin'ireo orinasa ireo ary toa azo inoana fa misy fiatraikany amin'ny orinasa hafa toa KPMG sy HP na dia mbola tsy voamarina aza ireo tranga ireo.
Avy ny fanafihana karazana ransomware izay misy virus virtoaly izay mampiditra fampahalalana amin'ny solosaina voakasiky ny fanakanana ny tompony tsy hiditra ao anaty ny atiny hangataka amin'ny fandoavana avotra ho takalon'ny fanesorana ilay encryption voalaza. Ny fantsona mahazatra amin'ny fandoavana ity karazana vidim-panavotana ity dia amin'ny alàlan'ny bitcoins vola virtoaly, izay manasarotra ny fanarahana ny vola. Araka ny angon-drakitra tonga aty aminay, toa farafaharatsiny Solosaina Telefónica miisa 100 no efa voakasik'izany miaraka amin'ny viriosy.
Olana iray izay misy fiantraikany amin'ny foiben'ireto orinasa ireto ihany fa amin'ny zanany sy ny birao faharoa koa, ka mety hiatrika olana lehibe isika. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy namerina ny vaovao ny haino aman-jery lehibe, na dia efa manomboka miseho aza izy io fampahalalana isan-karazany ao amin'ny Twitter. Tsy misy koa tsy misy fifandraisana ofisialin'ny fanafihana tsy misy amin'ireo orinasa voakasik'izany na ny talen'izy ireo.
1 Hafatra avy amin'ny ekipa mpiambina Telefónica
2 Orinasa sy fikambanana maro hafa voakasik'izany?
3 Manome toky i Telefónica fa efa voafehiny ny toe-javatra
4 Ny CCN-CERT dia manamafy ny fanafihana
Hafatra avy amin'ny ekipa mpiambina Telefónica
Ny ekipan'ny fiarovana ny telefaona dia manaparitaka ity hafatra ity mba hahafahan'ny mpiasa rehetra vonoy ny solosaina ary aza velomina amin'ny alàlan'ny fiheverana rehetra.
MAZAVA: ATAOVAO IZAO NY MPITARAKAO
Ny ekipa Security dia nahatsikaritra malware niditra tao amin'ny tamba-jotra Telefónica izay misy fiatraikany amin'ny data sy rakitrao. Ampahafantaro azafady ny mpiara-miasa aminao rehetra momba an'io toe-javatra io
Vonoy izao ny solosaina ary aza velomina intsony raha tsy misy fampandrenesana fanampiny (*).
Handefa anao izahay mailaka azonao vakiana amin'ny alàlan'ny findainao rehefa voalamina ny toe-javatra. Ho fanampin'izay, hampahafantarinay anao amin'ny vavahady fidirana amin'ireo tranobe momba ny fidirana amin'ny tamba-jotra.
Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa amin'ny birao fanampiana (29000)
(*) Atsaharo ny finday amin'ny tamba-jotra WiFi fa tsy voatery hamono azy ianao
Voarara koa ny mpiasa esory izay karazana fitaovana informatika ao amin'ireo tranokala misy azy.
Ny loharanom-baovao tany am-boalohany dia manondro fa ny ny fanafihana dia avy any Sina ary efa misy solosaina Telefónica mihoatra ny 100 izay nisehoan'ny hafatra momba ny vidim-panavotana. Nampahafantatra ny orinasa fa tsy misy fiatraikany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifany, izay mbola mandeha ihany ny fanafihana.
Orinasa sy fikambanana maro hafa voakasik'izany?
Araka ny vaovao tonga any aminay dia misy orinasa maromaro toa Everis izay mangataka amin'ny mpiasan'izy ireo hamono ireo solosainaTsy fantatray raha misy ny porofon'ny fanafihana na raha fepetra fiarovana fotsiny dia efa nitatitra olana ihany koa ny hafa toa ny Gas Natural Fenosa ao amin'ny tambajotran'izy ireo. Minitra vitsy lasa izay dia nahazo ny tsaho voalohany momba ny a aretina azo atao amin'ny rafi-bahoaka izay misy fiatraikany amin'ny angona voaaro.
Manome toky i Telefónica fa efa voafehiny ny toe-javatra
Loharanom-baovao avy amin'ny Telefónica Nambaran'izy ireo fa voafehy ny fanafihana cyber ary ny vokatr'izany dia tsy nitatra be araka ny nambara voalohany. Toa niditra tao anaty solosaina teo ambanin'ny fanavaozam-baovao tsy hita Windows ity viriosy ity ary nisy fiatraikany tamin'ny solosaina Windows 10 nanararaotra lesoka fiarovana lehibe.
Ny CCN-CERT dia manamafy ny fanafihana
Avy amin'ny CCN-CERT "fanafihana ransomware goavambe izay misy fiatraikany amin'ny fikambanana Espaniola marobe" https://t.co/G0HRi77nZa pic.twitter.com/GE8hJGuvnQ
- Chema Alonso (@chemaalonso) Enga anie 12, 2017
From sioka navoaka avy amin'i Chema Alonso dia hitanay fa ny CCN-CERT dia efa nanako ny fanafihana fikambanana Espaniola marobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Nanafika i Telefónica, Vodafone ary BBVA
Ny mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Android
DOOGEE Y6 Max 3D, fanadihadiana sy hevitra